Waa sidee ra’ayiga Julen Lopetegui macalinka cusub ee kooxda Real Madrid kaga aadan Cristiano Ronaldo? – Gool FM
(Real Madrid) 12 Juunyo 2018. Kooxda Real Madrid ayaa kaga yaabsatay cidkasta kadib markii ay si rasmi ah u shaacisay in macalinka xulka qaranka Spain ee Julen Lopetegui uu noqon doono badalka Zinedine Zidane ee Los Blancos kadib koobka aduunka 2018.
Kadib ku dhawaaqista labada dhinac ee maamulka kooxda Real Madrid iyo xiriirka kubada cagta dalka Spain, wargeysyada gudaha dalka Spain uu hogaaminayo “Marco” ayaa waxay daabaceen wareysi uu horey u bixiyay 51 jirkan reer Spain.
Julen Lopetegui ayaa sheegay in xidiga koowaad ee kooxda Barcelona ee Lionel Messi iyo xidiga ay kubada cagta ku dagaalamaan kooxdiisa cusub ee Real Madrid Cristiano Ronaldo ay yihiin labada xidig ee ugu fiican taariikhda kubada cagta.
“Cristiano Ronaldo waa xidiga xiligan, Portugal waxay heystaan koox fiican waa Champions yurub, waxay heystaan ciyaartoy waa weyn, dhanka kale, mustaqbalka Ronaldo, waa arin aan I quseynin aniga”.
“Wuxuu awooday inuu la dagaalamo Messi, isla markaana u ku guuleysto abaal marino guud iyo kuwo gaar ah, waa dagaal yahay aan inaba caadi ahayn, taasoo ku saleysan shaqada iyo dadaalka uu bixiyay, waa kan ugu adag qolka labiska ee heer maskaxeed”.